IMeya Ibuyekeza Iminyaka Emibili Isehhovisi – Msunduzi News
IMeya Ibuyekeza Iminyaka Emibili Isehhovisi
By Nhlanhla Mtaka
Ngokohlelo, inkulumongxoxo bekumele iqale ngehora leshumi. IMeya uNjilo ifike kusenehora ngaphambi kwesikhathi. Ingxaki kube yisimo esiphuthumayo esiqhamuke sekufanele kuqalwe. Kube namalungu omphakathi abenezikhalo eziphuthumayo nanxuse ukuba azethule kuyo iMeya. Ngenhlonipho iHhovisi leMeya ledlulise isicelo sokuba umhlangano uhlehliselwe isikhathi santambama. Lokhu kunike izintatheli ithuba lokubona ukusebenza kwansukuzonke kweMeya.
IHhovisi leMeya neliphakathi eHholo leDolobha liyindawo ematasa, uma kungebona abantu abasuke beze emhlanganweni kusuke kuyizincingo zabafuna usizo. Sifikile isikhathi somhlangano noqale ngokuthi iMeya iqinisekise ukuthi umlayezo wayo wokuxolisa ekuhlehliseni umhlangano ufikile yini. khululekile nxa ithola ukuthi ufikile . Okumangazile iqala nje ingxoxo ukungesabi kweMeya ukusho lokho okuyizingqinamba nokwenze yahlehlisa umhlangano.
“Isizathu esenze lo mhlangano wethu waqala ngalesi sikhathi wudaba oluthinta amalungu oMkhonto Wesizwe. Abenesikhalo sodaba abebona sengathi seluthathe isikhathi eside nokuthe ngokuhlangana kwethu kwabonakala ukuthi kungenzeka ukuthi inkinga ibe kwezokuxhumana ngakolwethu uhlangothi ngoba abakhala ngakho empeleni uMkhandlu kade wakusebenza kwedlula. Lokhu nje kukhomba esinye isidingo esimqoka sokukwazi ukuxhumana nomphakathi, izinto zizimbi noma zizinhle. Lesi yisifundo,” kusho iMeya.
Ungene eminyakeni emibili eyedlule nokuyinto abantu abaqala bayihumusha ngezindlela ezahlukene. Kukhona ababethi bekumele kuthathwe umuntu obevele ezibandakanya nepolitiki hhayi “umuntu wangaphandle”. Nokho bekukhona abanye ababethi umuntu onjengoNjilo osebenza nomphakathi nonegama elingenawo ugcobho uyadingeka ukuzolungisa isimo. Ebuzwa ngokuthi ngabe wabe ekulindele yini ukuba yiMeya nokuthi lokhu kwenze guquko luni empilweni yakhe uNjilo uthe: “Angiqale ngokusho ukuthi lesi sikhundla njengazo zonke ezikhona ngangingeke ngisivume ukuba singenze umuntu engingesiye. Ngakho ngisamukele njengesicelo nomlayelo othi angiyokwenza okuhle engivele ngikwenza emphakathini, ngikwenze manje sengisesikhundleni sobuMeya.”
Ubufakazi balokhu abekusho uNjilo busekutheni yize eyiMeya yeNhlokodolobha yaKwaZulu-Natal uyaqhubeka nemisebenzi yakhe yesihe ayenza ngaphansi kwesambulela iThemba Njilo Foudation. Phakathi kwezinto aqhubekayo nokuzenza wukuhlinzekela labo abampofu nabadingayo ngezindlu.
UNjilo ukuvumile ukuthi ukufika kwakhe njengeMeya kudale ukulangazelela okukhulu kubantu abehlukahlukene nathe njengoMkhandlu kancane kancane bayaziletha izimpendulo kwezinye zezigqinamba ezabe zikhungethe uMkhandlu.
“Uma ngingena kwaba nezinto eziseqhulwini enye yazo okwabe kuwukuqinisekisa ukuthi uMsunduzi uthatha indawo yawo njengeNhlokodolobha yeKwaZuluNatal. Izindawo ezinjengaseThekwini naseRichards Bay azikwazi ukunikezwa isithunzi sobuNhlokodolobha sikhona singuMsunduzi. Khona lapho ngiyakwamukela ukuthi ukuze sifike lapho kumele senze izinto ngendlela eyehlukile ukuze siphumelele,” kusho uNjilo.
Uveze ukuthi enye yezinto ayifisayo ohlelweni lwakhe lokwenza uMsunduzi uthathe isikhundla sawo sokuba yiNhlokodolobha wukwakha ingqalasizinda nathe ngeke kwenzeke uma bungekho ubudlelwano nosomabhizinisi bendawo, abakhulu nalabo abasafufusayo.
“Ayikho into ebuhlungu njengokuthi abantu abasuke bezoba nemihlangano edolobheni lethu baphoqeleka ukuthi kokunye bahlanganyele nathi ngaphandle kwedolobha noma balale eThekwini bese bevukela ukuya emhlanganweni eMsunduzi. Lokho kusho ukulahleka kwemali okungabe itshalwe endaweni yethu. NjengoMkhandlu siyobe asenze lutho uma ngokubambisana nenzinye izinhlaka singasilungisi lesi simo,” kusho uNjilo obekubonakala ukuthi lolu daba luyamhlupha.
UNjilo uphawulile nangezokuvakasha nathe kumqoka ukuthi zihlelwe kahle ngoba uMsunduzi unothile ngomlando.
“Amadolobha amakhulu emhlabeni jikelele aphumelela ngoba elandela uhlelo olunenzuzo lwezokuvakasha. Angingabazi ukuthi uMsunduzi ungakwenza lokho njengoba ucebile ngezindawo zomlando okuyinto ethandwa kakhulu yizivakashi. Maduze nje sizokwethula uhlelo lwezokuvakasha sibambisene nazo zonke izinhlaka ezithintekayo.”
Olunye udaba abe nesililo ngalo olwepolitiki enenkohlakalo nokufa nesicishe yadodobalisa izinhlelo. “ Esimweni esejwayelekile ipolitiki kumele kube yinto eletha isixazululo kubantu. Yikho kwaba yiyo eyaletha izinguquko kuleli ngesikhathi i-African National Congress namanye amaqembu ayelwela inkululeko iba sekhaleni lempi yenkululeko. Ngeshwa osekwenzeka manje akusahambi ngandlela lapho sekunokuklolodelana, ukunyundelana nokubulalana. Into enhle kangaka isiphendulwe into embi.
“Akuwona umlando omuhle ukuthi indawo yethu ibalwe nezinye lapho kulimala kufe khona abaholi nezinye izisebenzi kuHulumeni. Kuwumkhuleko wami ukuthi sidlule kulokhu ukuze sibuyisele ipolitiki endaweni, lapho yabe iyihawu lomphakathi hhayi isikhali sokuhlukumeza umphakathi nokwenza kungabi nenhlalakahle,” kusho iMeya. Khona lapho uNjilo uthe unethemba lokuthi amaqembu ezepolitiki ngaphandle kokubheka imibala azophakama alandele ubizo lokuletha intuthuko kubantu baseMsunduzi nathe bafanelwe ngokungcono.
Odabeni olusematheni lokumiswa kweMeneja uNjilo uthe yize kungafanele ukuba lolu daba lukhulunywe nguye okwamanje njengoba kusenemigudu nokuthile okulandelwayo uthe nokho kumqoka ukuthi izakhamizi zazi ukuthi konke abakwenzayo bakwenza ngenxa yokwamukela ukuthi zifanelwe ngokugcono. Echaza isinqumo esaholela ukuba uMkhandlu umise iMeneja uMnu uSizwe Hadebe, uNjilo uthe konke kwenziwa kulandelwa imithetho elawula abasebenzi kanye nokusebenza komasipala.
“Isinqumo esathathwa salandela umhlangano woMkhandlu. Ekuqinisekiseni ukuthi akukho okuphazamisekayo saqoka uNks uNeli Ngcobo nengingasho ngokungananazi ukuthi uyibambe ngakho. Sengikushilo lokho silandele imithetho elawula ukusebenza komasipala ukuthi sicele uCogta ukuba aselekelele ngokusilethela umuntu wangaphandle ukuze azobamba nokuyinto esivumelene ngayo sonke. UNks uNgcobo uqokwe nje uvele unomsebenzi wakhe wokuphatha izimali kumasipala nesingafisi uphazamiseke,” kuchaza iMeya.
Oshicilelweni oluzayo iMeya izobe ichaza ngengqalasizinda esikhona nehleliwe kule minyaka emibili.
Previous post: Isifiso sabafundi sokubuyisela okuhle eMsunduzi
Next post: Council pushes back against illegal, fake products